Fahazoan-dàlana amin'ny banky? Onshore Offshore Mamorona banka an-tserasera!
TSORATRA FIVORIANA BANK
Nandritra ny 10 taona mahery dia manome torohevitra sy miaraka amin'ny mpanjifany amin'ny dingana sy ny fahazoan-dàlana ny Banky Bank i Fidulink mba hahafahan'izy ireo manokatra ny Banky azy ireo manokana. Fanohanana feno amin'ny lalampanorenana rakitra ny fahazoan-dàlana ny Banky nefa koa ao amin'ny lalàm-panorenan'ny orinasa ao aminy sy ireo any amin'ny sehatra mihoatra ny 56 eto amin'izao tontolo izao.
Serivisy fanamboarana sy fihodinana vita amin'ny vatosoa hanolotra serivisy ho an'ny mpanjifantsika. Ekipa manam-pahaizana manokana momba ny sehatry ny banky sy ara-bola manerana izao tontolo izao. Miaraka amin'ny traikefa ananantsika sy ny fitaovana ary ny vahaolana amin'ny fahazoan-dàlan'ny banky anao dia ho dingana tsotra ary tsy dia ho lasa mpandeha intsony aza.
Miaraka amin'ny zavatra niainana toa anay, tsy afaka milaza aminao fotsiny izahay fa ny fahazoana ny fahazoan-dàlana amin'ny banky dia tsotra.
FANGALAM-POANA NY FIVORIANA BANK
FIDULINK manolotra fanampiana ho an'ny mpanjifany amin'ny fangatahana sy ny lalàm-panoratana ny rakitra fahazoan-dàlan'ny Banky. ny mpiasa FIDULINK fenoy ny fangatahana fahazoan-dàlana Banky.
Mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny banky, ny hany mila ataonao dia ny mangataka izany amin'ny mpanolo-tsaina. FIDULINK.
HITADY NY ONDRANAO AN-TOKONY?
Te-hamorona Banky ve ianao? Mahazo Banky An-tserasera?
Ny fananganana ny bankinao ao anatin'ny andro vitsivitsy dia azo atao miaraka amin'ny vahaolana amin'ny FIDULINK ny fananganana ny Banky anao, ny lalàm-panorenan'ny rakitra fangatahana fahazoan-dàlana sy ny fizotran'ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny banky, ny fampidirana banky, ny fametrahana ny fomba fandoavam-bola, ny fampiantranoana ary ny famoronana ny tranonkala.